KillDisk ine musiyano unokanganisa Linux | Linux Vakapindwa muropa
KillDisk ine musiyano unokanganisa Linux
KillDisk imhando yemarware ransomware Iyo inonyora zviri mukati meiyo hard drive kana ichizadza system. Rudzi rwe malware runotarisira kuunganidza mari, sezvo "vapambi" vachiwanzokumbira mari kuti vakupe password iyo yaunogona kutsikisa iyo data pane yako hard drive uye kuitorezve. Mune zvimwe zviitiko, humwe "kusasimba" murudzi urwu rwehutachiona hunogona kushandiswa kupora data pasina kubhadhara, asi izvi hazvisizvo mune zvese zviitiko.
Kana iwe usina backup ye data rako uye yakakosha, kutapukirwa neimwe yeiyi kunogona kuva nenjodzi. Huye, isu tanga tataura nezve akati wandei rudzikunuro pane ino webhusaiti iyo inokanganisa Linux, uye ikozvino iyo chaiyo komputa yekuchengetedza kambani ESET yaona musiyano we KillDisk inokanganisa Linux zvakare.
Iyo tyisidziro inorondedzerwa seyakakomba, nekuti nekunyorera iyo system zvinoita kuti zvisakwanise kutanga mune ino kesi, kuisa pangozi makomputa uye data rakachengetwa pavari. Zvinenge zvichinyanya kukuvadza kana zvikanganisa makambani masisitimu ane data rakakosha. Asi sekutaura kwandaita mundima dzapfuura, hadzisi dzese dzerudzikunuro dzinokanganisa, uye nerombo rakanaka iyi haisi, nekuti ESET yawana hutera iyo inobvumidza kudzoreredza iyo data ichibvisa kunyorera.
Uye zvakare, ivo vanonyevera kuti iwe haufanire kubhadhara ransoms iyo dzimwe nguva inogona kutangira kubva pamazana mashoma emauro kusvika kuzviuru zvavo. Naizvozvo, iwo muripo unodhura, huwandu hwacho hunowedzerwa zvichienderana nekukosha kwedhata rakanyorwa uye kufarira kune munhu anenge akuvara pakuzvidzorera. Asi nyanzvi dzinopa zano kuti usabhadhara izvi cybercriminals, nekuti dzimwe nguva kunyangwe kubhadhara kunovimbiswa kuti vanochengeta izwi ravo uye nekupa password kuti vakwanise kutsanangura zvirimo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » KillDisk ine musiyano unokanganisa Linux
Joseph Celis akadaro
Ivo vanodzoka zvakare neRudzikunuro rwekuverenga zvakati wandei zvakatumirwa pamusoro peizvi uye ivo havatsanangure mabasa avo nezvigadziko, zvinongoti zvinokanganisa uye ikozvino, tarisa, ini ndinogadzira mirairo yekuraira uye ndinoziva kwazvo kuti kuita mamwe mabasa. iwe unofanirwa kuve wekutanga superuser kutanga uye wechipiri pane mirairo Nekuda kwekunakidzwa kwayo uye chengetedzo, ivo havabvumire kuitiswa kwayo nenzira yakazara, zvekuti zvinongoitika mumawindo, vazhinji vedu vanoshandisa gnu / linux tinoziva kuti iyi ndiyo kesi nekutaura kuti iyo system kana ikaona script inoisa sechisarudzo kana iwe uchida kuti iitwe sechirongwa kana kwete, aya marudzi eruzivo rusina hwaro hapana.
Pindura Jousseph Celis
Zvekare zvakare zvinoratidzwa kuti kuchengetedza imwe data pakombuta yedu inobatana neInternet haina kuchengetedzeka zvachose. Kana komputa yedu yakabatana neInternet isina kuchengetedzeka, fungidzira zvinogona kurongeka kana tichivimba nepassword nemakiyi patinenge tichibhadhara zvikwereti uye nevamwe nemafoni edu, mapiritsi, mafoni efoni uye zvimwe zvishandiso nemidziyo. Kutanga ivo vakagadzira matekinoroji anodikanwa uye ikozvino isu tave nedambudziko, isu tinoita sei? Ehe, zviri nyore kwazvo uye zvakagadzikana uye basa rakawanda rakasunungurwa nezvose izvi maturusi asi chii chatinoita nedambudziko rese iri risiri diki zvachose.
@Jousseph: Chinhu chacho ndechekuita mushandisi "kuruma" uye kumhanyisa chirongwa (script kana kuitisa) ne "bug". Kuti uchengetedze maforodha ehurongwa, iwe unoda mvumo yekumhanya, asi kuti unyore zvese zviri muhodhi yako wega zvinongoda kuti umhanye pasina imwe mvumo.
Seyero yekuchengetedza, isa ese software kubva kumaneja wepakeji uye usavimba nema executable ayo asina kodhi yekodhi inowanikwa.
Nezvose izvi, kana iwe ukashandisa zvakanaka komputa, hazvishamise kuti chimwe chinhu chakadai chinga tsvedza.
Iyo rudzikinuro inonyora ese ako * ega * mafaera (iwo aunayo mune yako wega dhairekitori, kazhinji) uye ndokukumbira iwe kuti ubhadhare "mumwe munhu" kuti abise iwo.
Pindura kune Mumwe
Richard Alvarez akadaro
Chero chiitiko chehutachiona mu linux zvakanyorwa? ...
Pindura kuna Richard Alvarez
Diego reguero akadaro
Mubvunzo wemamiriyoni emadhora ndewekuti, pane zvakaitika kune chero ani? Pane chero munhu anoziva mumwe munhu akamboitika kwaari?
Kwete, mukuwasha wako uyo akarekodha vhidhiyo yaRicky Martin uye iyo foie gras haina kukosha.
Pindura Diego Reguero
wattOS yakakura isingaremi Ubuntu based based distro